Patios de Córdoba, Nnukwu Ihe Nketa nke Mmadu | Akụkọ Njem
na ụzọ nke Patios nke Córdoba Amaghi ha nke oma nye ndi njem nlere anya, ndi lekwasiri anya na katidral alakụba na mpaghara nke obodo ochie nke a na-ahụ anya. Ma n'azụ ọnụ ụzọ ụfọdụ nke ụlọ ndị kacha ochie, a na-ezobe akụ dị ezigbo mkpa, ogige nke ghọrọ ihe dị mkpa na ụlọ ndị dịbu n'oge Rom na nke ndị Alakụba.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ patio ndị a n'ebube ha niile, anyị ga-aga Mee, nke bụ mgbe Oriri nke Patios nke Córdoba. Ulo nke ejiri otutu okpokoro chọọ patios ndị ahụ mma ka ha wee maa mma. O doro anya na ọ bụ ahụmịhe mara mma ma ọ bụrụ na anyị ezute n'obodo n'oge a.
1 Patios nke Córdoba
2 Zọ nke Patios
3 Ogige ogige
Patios nke Córdoba
La ezigbo ihu igwe na obodo Córdoba akwadowo ịmepụta ụdị ụlọ a n'oge nke mmeri Rome. Ihe owuwu nke gara n’ihu na ndị Alakụba dị mkpa ma taa. A na-ahụkarị ogige dị n'etiti ụlọ Andalusian, ebe ọ bụ mpaghara dị nso n'ụlọ ahụ dị n'èzí, ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ikuku ọhụrụ na anwụ n'oge niile n'afọ na na nzuzo nke ụlọ nke anyị. Patlọ ndị a na-enwebu olulu mmiri ma ọ bụ ebe a na-anakọta mmiri, ihe dị mkpa n’obodo ebe mmiri anaghị ezo, yabụ na ụfọdụ olulu mmiri ochie ka nwere ike ịhụ dị ka akụkụ nke patio.
Ogige ndị a mmọ ẹdu ke ufọt ufọk oroKa ị na-agafe na paseeji, nke ejiri mosaics ma ọ bụ okooko osisi chọọ ya mma, ị rutere na patio, na-apụ n'èzí ọzọ. Patlọ ọrụ ndị a nwere ike ịnwe okwute ma ọ bụ mosaic na ala, ahịhịa, isi iyi ma ọ bụ olulu mmiri n'etiti. Na mgbakwunye, ụlọ ndị kacha ochie nwere klọọkụ gburugburu ha na mbara ihu ndị a na-ejikwa okooko osisi chọọ mgbe niile.
Zọ nke Patios
Buru n'uche na enwere patio na ebe dika Ezigbo ụlọ na mkpọmkpọ ebe. Enwere ike ịhụ ha oge ụfọdụ n'ime afọ, mana patios ndị ama ama nke ụlọ ndị mmadụ na-enweta naanị na ọkara ọkara nke Mee. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata patio ndị a, ị chọkwara ịhụ ndị nke izizi na nke a na-eme n’ụlọ, ị kwesịrị ị na-eche Ememe de los Patios.
Y’oburu n’achoghi ichoghi otu uzo ihe ndia mee njem nlegharị anya maka ndị njem nleta, ka anyị wee ghara ichegbu onwe anyị banyere ịchọ ha. Zọ ọzọ iji nwee ọ enjoyụ na patio bụ teknụzụ ọhụụ. Anyị na-akwado gị ka ị gaa na Ọnụ ụzọ ámá nke patio ma ọ bụ ngwa ya, ebe enwere ọtụtụ ụzọ gafere na mpaghara kacha ochie nke Córdoba iji nwee ọmarịcha patios.
Ndị na-enweghị obi ụtọ ịga leta obodo ahụ n'oge oge May na aka nri na ememme patio, nwere ike ịrịọ njem nlegharị anya nke ụlọ ọrụ DePatios, nke na-ahazi njegharị na patios ise nke kachasị mkpa, ha niile na-ekere òkè n'ememe ahụ. Ogige ndị a dị na Calle San Basilio, Martín de Roa, Duartas, La Barrera na Postrera. Anyị kwesịkwara ịmara na onye ọ bụla emeriwo ihe nrite na patio party, nke mere na ọ bụ nhọrọ na-atọ ụtọ nke patio dị mkpa.
Iji mụtakwuo banyere patio ndị a, anyị nwere ike ịga na Centerlọ Ọrụ Ntugharị nke Cordovan Patios, nke dị na Calle Trueque nọmba 4. Ebe a nwere ọnụ ụlọ anọ raara nye ememme ogige, ụlọ ime ụlọ abụọ, ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta.
Ememme ogige a na-eme ọkara mbụ nke Mee ma ị nwere ike ịga ọtụtụ ogige ndị mara mma na oge ochie na obodo, n'ụlọ ndị mmadụ, ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe omume n'obodo ahụ. Ndị otu a malitere na 1921 nke kansụl obodo Córdoba guzobere ọ nọgidewokwa na asọmpi a na-atụ anya nke ukwuu maka ndị nwe ụlọ na ndị ọbịa n'obodo ahụ. N'ime ụzọ a, ebe kachasị mara ebe ogige ndị na-esonye dị. Site na mpaghara Alcázar Viejo ruo San Basilio, agbata obi Santa Marina, San Lorenzo na Magdalena. Rozọ ahụ nwere ike ịdị iche na ụzọ dị iche iche esi ahụ ha. Na mgbakwunye, n'oge oriri ahụ ọnụ ụzọ ha bụ n'efu ka ị wee rite uru na ya. Otu n'ime ebe a na-agaghị echefu ememme a bụ Palacio de Viana, ebe dị egwu nke na-enye patio iri na abụọ. Ndị otu a abụghị naanị na-eleta patio, nke ejiri geranium ndị a na-achọkarị mma na ite ha, kamakwa a na-eme ememme ọchị na mpaghara San Basilio, na-esote Royal Stables, nke mezuru nnọkọ nke patio.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Córdoba » Patios de Córdoba, Ihe Nketa A Na-apụghị anghụ Anya nke itymụ mmadụ